Vaovao - Inona no atao hoe herinaratra elektrika
Ny herinaratra mandeha amin'ny herinaratra (HPU) dia ampiasaina ho fitaovana famatsiana solika, izay mifamatotra amin'ny varingarina hydraulic maro amin'ny alàlan'ny rafitra fantsom-pifandraisana ivelany hifehezana ny asan'ny valves maro.
Ny fitoeran-tsolika, paompy solika ary fitaovana fanovozana angovo dia manangana rafitra loharanom-pahefana tsy miankina mikatona. Ny tobin-tsolika dia azo ampitaina miaraka amin'ny rafitra fanaraha-maso PLC, izay mifehy ny asan'ny hidy anaty rehetra ary mamoaka famantarana sy mifehy ny fitoeran-tsolika, paompin-tsolika ary fitaovana fanovozana angovo mba hamoronana rafitra loharano misy menaka tsy miankina mikatona. Ny tobin-tsolika dia azo ampitaina amin'ny rafitra fanaraha-maso PLC, izay mifehy ny fiasan'ny hydraulic rehetra ao anatiny ary miteraka famantarana sy fanaraha-maso.
Amin'ny fepetra mahazatra, ny paompy solika dia manome solika ny rafitra, mitazona ho azy ny tsindry nomen'ny rafitra ary mahatsapa ny fiasan'ny valizy amin'ny toerana rehetra amin'ny alàlan'ny fanakanana ny valizy fanaraha-maso: amin'ny fanjakana miasa, ny actuator hydraulic dia fehezin'ny valizy solenoid sy ny baiko mibaiko ny rafitra Actuate the valeno solenoid hifehezana ny tsindry solika sy ny famoahana angovo avy amin'ny accumulator, ary avy eo mifehy ny valizy solika solika, alefaso ny valva amin'ny alàlan'ny mekanika fandefasana mekanika, ary ampiharo haingana, fanokafana sy fanidiana ary fanaraha-maso ara-dalàna.
Ny varingarina avo lenta dia azo raikitra amin'ny vatan'ny valizy na ampiasaina mivantana ho toy ny actuator. Averina any amin'ny tobin'ny solika hydraulic ny menaka hydraulic mihoatra, ka ny fantsom-pantsaka dia mampiasa fantsom-pidirana solika iray-fantsona fiverenana solika iray hifehezana valves maro mifandraika. Ity tobin-tsolika ity miaraka amin'ny teknolojia fiara manokana dia ampiasaina hifehezana ny asan'ny valizy etona lehibe sy ireo mpiorina amin'ny rafitra bypass turbin steam.
Ny fitaovana herinaratra dia nohatsaraina ho an'ny fepetra fampiharana isan-karazany, ohatra, azo ampiasaina amin'ny kamio mandeha amin'ny tontolo masiaka, na ampiasaina amin'ny fepetra fikirakirana asa mavesatra maharitra, ary fotoana hafa izay mitaky vokatra avo lenta sy avo lenta.
Ny valiny dia sehatra iray tena samihafa, mampiasa singa mahazatra, izay afaka miatrika ny ankamaroan'ny fepetra fampiharana takian'ny tsena. Ny fitanisan'ny mpanjifa ny singa hidrano dia ahena kely ary ny asany amin'ny famolavolana tsy fenitra dia ahena be. .
Izy io koa dia mampihena be ny asan'ny famolavolana tsy mahazatra. Ohatra, ny herinaratra HE dia miorina amin'ny sehatra maro samihafa. Ny haben'ny motera azo avela dia manomboka amin'ny 80 ka hatramin'ny 132mm (0.3 ~ 4.5kw), ary ny famindrana paompy dia 0,24 ka hatramin'ny 5,7cc. -Ny tariby herinaratra dia afaka mifehy varingarina hydraulic 4. Ny singa fototra amin'ny rafitra dia ny adaptatera. Misy famaritana roa samihafa. Manana endrika sy fomba fametrahana isan-karazany izy io.